Virtavia Westland Merlin EH101 DOWNLOAD FSX & P3D - Rikoooo
အရွယ် 10.4 ကို MB
downloads ရယူရန္ 12 821
အခြားအကြီးအ add-on ယခင် payware, Virtavia ကအဆိုပြုထားတဲ့လူသိများတဲ့ရဟတ်ယာဉ်မှဤ add-on ၂၀၁၄ ခုနှစ်တွင်အခမဲ့ဆော့ဝဲလ်ဖြစ်လာခဲ့သည်။ 2014D အခန်း၊ VC၊ ထုံးစံအတိုင်းအတာနှင့်အသံများ၊ HC3 နှင့် HM3 ။
FS2004 များအတွက် version ကိုရယူ ဤနေရာကိုကလစ်နှိပ်ပါ
1977 ခုနှစ်တွင်ကာကွယ်ရေးဗြိတိန်ဝန်ကြီးဌာနဆိုဗီယက်ရေငုပ်သင်္ဘောနည်းပညာတိုးတက်မှု၏မျက်နှာ၌မလုံလောက်ဖြစ်လာခဲ့ပြီးသောတော်ဝင်ရေတပ်၏ Westland ပင်လယ်ပြင်ရာဇဝငျ, အစားထိုး anti-ရေငုပ်သင်္ဘောစစ်ဆင်ရေး (ASW) ရဟတ်ယာဉ်များအတွက်လိုအပ်ချက်ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ Westland ရဟတ်ယာဉ်ပင်လယ်ပြင်ရှငျဘုရငျမှအလားတူရှုထောင့်တစ်သုံးအင်ဂျင်ရဟတ်ယာဉ်များအတွက် WG.34 designated တစ်အဆိုပြုချက်ကို, အတူတူ ထား. , အ WG.34 ပိုပြီးကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်နှင့်၎င်း၏နောင်တော်ထက် သာ. ကြီးမြတ်အကွာအဝေး feature ဖို့ဖြစ်တယ်။ တချိန်တည်းမှာပင်, အီတလီရေတပ် (Marina ့စစ်တပ်), အစအီတလီကုမ္ပဏီ Agusta ကတည်ဆောက်ပင်လယ်ပြင်ဓမ္မရာဇဝင်၎င်း၏ရေတပ်များ၏အစားထိုးစဉ်းစားခဲ့, Westland နှင့် Agusta မကြာမီတစ်ဦးကိုဆက်ခံရဟတ်ယာဉ်၏ဖွံ့ဖြိုးရေးပူးတွဲနှင့် ပတ်သက်. ဆွေးနွေးပွဲစတင်ခဲ့ပါသည်။
Agusta Westland နှင့်အတူတကွစီမံကိန်းကိုအပေါ်လုပ်ကိုင်ဖို့သဘောတူညီချက်အပြီးသတ်နှင့်အလားအလာအော်ပရေတာမှအသစ်ရဟတ်ယာဉ်များ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးနှင့်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးကိုလိုက်ရန်ပူးတွဲပိုင်ဆိုင်သည့်ကုမ္ပဏီသစ်, Eh Industries, လီမိတက် (EHI), ဖွဲ့စည်းခဲ့သည်။ 12 ဇွန်လ 1981 တွင်ဗြိတိန်နိုင်ငံအစိုးရ, စီမံကိန်းကိုအတွက်၎င်း၏ပါဝင်မှုအတည်ပြုကိုး Pre-စီးရီးဥပမာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့£ 20 သန်း၏ကနဦးဘတ်ဂျက်ခွဲဝေ။ အ EH101 ရဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်၏အများစုအတွက်ရန်ပုံငွေလုံခြုံသောအဓိကသဘောတူညီချက်, 1984 အတွက်ဗြိတိန်နဲ့အီတလီအစိုးရများနှစ်ခုလုံးကလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ အ 1985 ပဲရစ် Air လေကြောင်းလိုင်း Show မှာ, Agusta အမျိုးမျိုးသောအရပ်သားသို့မဟုတ်စစ်ရေးဖောက်သည်များ၏လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းဖို့စိတ်ကြိုက်နိုင်ပိုပြီး generalized ဒီဇိုင်းကိုမှဦးဆောင်သစ်ရဟတ်ယာဉ်တစ် utility ကိုဗားရှင်းတစ်ကဲ့ရဲ့-up ကပြသခဲ့သည်။ ပထမဦးဆုံးရှေ့ပြေးပုံစံ9အောက်တိုဘာလ 1987 အပေါ်ပျံသန်းခဲ့ပါတယ်။
1987 ခုနှစ်, ကနေဒါ, anti-ရေငုပ်သင်္ဘောစစ်ဆင်ရေးမှာသူတို့ရဲ့ပင်လယ်ရာဇဝငျကိုအစားထိုးခြင်းနှင့်ရှာဖွေပြီးအခန်းကဏ္ဍကယ်တင်ဖို့ရန်အ EH101 ကိုရှေးခယျြခဲ့; အ EH101 ရဲ့တတိယအင်ဂျင်နှင့်ထိုကဲ့သို့သောအ Sikorsky Seahawks ၎င်း၏အကွာအဝေးနှင့်ဖယ်ရှား-icing စွမ်းရည်အဖြစ်ပြိုင်ဘက်လည်းမြောက်အတ္တလန္တိတ်စစ်ဆင်ရေးများအတွက်အရေးကွီးသအဖြစ်ရှုမြင်ခဲ့ကြဆန့်ကျင်လိုလိုလားလားနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ရေးတိုးတက်လာခဲ့သည်။ 101 မှတက်ကနေဒါတပ်မတော်နေ့ရဲ့ (က CAF) ပင်လယ်ပြင်ရာဇဝငျကိုအစားထိုးနိုင်ရန်ပေါ်မှာသောအထောငျခါစ EH50, ကွန်ဆာဗေးတစ်နှင့်လစ်ဘရယ်ပါတီတွေ, လွန်းငွေကုန်ကြေးအဖြစ်လေယာဉ်တင်ကြည့်အဆုံးစွန်သောအကြားတစ်ဦးပိုမိုကျယ်ပြန်နိုင်ငံရေးအရစစ်တိုက်ခြင်းငှါကိုယ်တိုင်ကဘာသာရပ်တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ ဝေဖန်သူများကအစောပိုင်း 101s အတွက်စစ်အေးတိုက်ပွဲရဲ့အဆုံးပြီးနောက်အလွန်အကျွံနှင့်မလိုအပ်သောအဖြစ် EH1990 ဝယ်ယူတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြသည်။ wide-အထိကုန်ကျစရိတ်ခန့်မှန်းပြိုင်ဘက် Sikorsky CH-101 ပင်လယ်ပြင်ဘုရငျနှငျ့ဘိုးအင်း Vertol CH-124 Labrador ရဟတ်ယာဉ်တပ်၏အသက် extensions တွေကိုကျောထောက်နောက်ခံနှင့်တကွ, EH113 ဝယ်ယူရေးနှစ်ယောက်စလုံးထောက်ခံသူများကနှင့်ပြိုင်ဘက်များကတင်ပြခဲ့ကြသည်။ အဆိုပါ EH101 အငြင်းပွားဖွယ်ရာထို 1993 ကနေဒါဖက်ဒရယ်ရွေးကောက်ပွဲတွင်အချက်တစ်ခုအဖြစ်ရှုမြင်ခဲ့သည်။ အဆိုပါအမိန့်ဟာ $ 1993 သန်းပယ်ဖျက်အခကြေးငွေအတွက်ရရှိလာတဲ့ 470 အတွက်အသစ်လစ်ဘရယ်အစိုးရကဖျက်သိမ်းခဲ့သည်။ (ဝီကီပီးဒီးယား)
သင်္ဘောသား entry ကို: ပြောင်းကုန်ပြီ-e
သင်္ဘောသားကိန်းဂဏန်းများ toggle: ctrl +-W (ရေတက်မ command ကို)
ပွင့်လင်းနောက်ဘက်ချဉ်းကပ်လမ်း (HC.3): Tailhook - T ကအဓိကသော့ချက်
နှစ် Sonar စုံစမ်းစစ်ဆေး (HM.1): Tailhook - T ကအဓိကသော့ချက်
ကားရှေ့မှနျ Wiper: L ကို
UKMIL ဘိုးအင်း Chinook HC2 FSX & P3D